आफ्नै सरकारको बचाउ गर्न छाडेर प्रचण्ड भारत अनि चीततिर
23 Apr 2019 | मंगलबार, १० बैशाख, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
काठमाडौं । आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिरक्षा नगरी मौन बस्ने गरेका प्रचण्ड अब भुराजनीतिक निसाना लगाउँदै । एउटै हेलिकप्टरमा जनकपुर पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २ भदौमा । त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश २ संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
खासगरी धनुषाको बर्मझियामा २४ बर्षअघि हत्या गरिएका माओवादी नेता रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्न गएका थिए प्रचण्ड ।
त्यहा ओलीले प्रचण्डको प्रशंसामा केही शब्द पनि खर्चिए । उनले भने प्रचण्डजी परिआए युद्ध गर्न पछि नपर्ने, फेरि आवश्यकता अनुसार शान्तिमा पनि आउन सक्ने बहादुर नेता हो । प्रचण्डलाई पुलकित बनाउने शब्दको फुलवर्षा गरेको एक साताभित्रै ओली किन तिक्तता साँँध्ने तहसम्म पुगे ? सत्ताराजनीतिको वरपर हिजोआज यहि जिज्ञासा सुरु भएको छ ।
किनभने ११ भदौमा बालुवाटारमा पुगेका सम्पादकहरुसँग ओलीले भनेका थिए, माओवादीले हिजो यो राजतन्त्रविरुद्ध हामी होईन क्यारे, भन्दै दरबारमा मान्छे पठाएर साँठगाँठ गरेकै थियो ।
सेनाविरुद्ध हमी छँदैछैनौँ भनेर विभिन्न जर्नेलहरुसँग साँठगाँठ थियो । ती माओवादी खुल्ला हुनेवित्तिकै मनोनित साँसद हुन पुगेका पनि थिए । जर्नेल हुँदाखेरी ती मोन्छे नेपाली सेनाको जागिर खाएर माओवादी नेतालाई बोकेर कुद्थे गाडीमा । त्यसकारण लिँकेज कसको, कहाँ भनेर भन्न गाह्रो छ । अहिले पनि म व्यक्त गर्दिनँ यो । तपाईहरु जान्नुहुन्छ, मेरो त्यत्रो धेरै एक्सेस छैन ।
त्यसको ९ दिनपछि अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन सक्छ । पुनर्गठन गर्दा यो वा त्यो समुह हेरिन्न, भनेका भए पनि बुझ्न कठिन छैन । उनको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै हो ।
मन्त्रीलाई कस्तो निर्देशन दिने, कसरी काम लगाउने सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रचण्डले प्रस्टै बुझिने भाषामा भनिरहेका छन्, जोसुकै परुन्, सरकार असफल हुने, पार्टीलाई असफल पार्ने र जनतलाई निराशा पार्ने खालका गतिविधि देखिए भने – अब हामीले कुनै न कुनै स्टेप चाल्नैपर्छ । आज प्रकाशित नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट ।
कति पैसा बोकेर हिड्छन् मुकेश अम्बानी ?
एजेन्सी । धीरूभाई अम्बानीका ठूला छोरा मुकेश अम्बानी ‘अलिबाबा’का संस्थापक ज्याक पछिका सबैभन्दा धनि व्यक्तिको सूचिमा रहेका छन् ।
याद गर्नु भएको छ ? घडीको विज्ञापनमा सँधै किन बजेको हुन्छ १०ः१० ?
एजेन्सी । घडी लगाउनमा हामीमध्ये सवै सौखिन नै हुन्छौ । नयाँ – नयाँ प्रविधिसँगै बजारमा धेरै थरिका घडी पनि पाइन्छन् । हामी घडी किन्छौ लगाउँछौ । र छिनछिनमै समयपनि हेर्छौ ।
थाहा पाउनुहोस् कस्ता हुन्छन् अभागी पुरुषहरु
एजेन्सी । भाग्यमानी र अभागीको चर्चा जीवनमा सबैले गर्छन् । भाग्यमानी अर्थात सुख–समृद्धि र श्रेष्ठ जीवन । अभागी अर्थात दुःख र चिन्ताले भरिएको जीवन ।
यी खानेकुरा एकसाथ खाँदै नखानुहोस्
वेद पुराण : के पुर्नजन्म हुन्छ त ?
एउटा अजबगजबको ठाउँ !
यी देशका युवाहरुले गर्छन् अत्याधिक चुरोट सेवन